RIKOODHADII & Xaqiiqooyinkii Layaabka Lahaa Ee Laga Diiwaangeliyey Kulankii Liverpool Iyo Leeds United - Gool24.Net
RIKOODHADII & Xaqiiqooyinkii Layaabka Lahaa Ee Laga Diiwaangeliyey Kulankii Liverpool Iyo Leeds United
September 12, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Liverpool ayaa guul ay ku dhibaatootay waxay ka gaadhay Leeds United oo ay kaga badisay 4-3 kulankooda ugu horreeya horyaalka Premier League oo ay isku haleeleen garoonka Anfield.
Mohamed Salah ayaa shimbir u noqday Liverpool oo ku hoggaamiyey saddexdooda dhibcood ee ugu horreeya xili ciyaareedkan, waxaanu dhaliyey saddexlay isaguna taariikhda ku galay, sidoo kalena kooxdiisa u horseedday inay kaga badbaaddo imtixaanka kooxda layaabka leh ee Leeds United ay kula soo laabatay horyaalka Premier League.
Liverpool oo soo afjartay inkaartii ka haysatay hanashada horyaalka muddada 30ka sannadood ahayd xili ciyaareedkii hore, waxa uu qorshaheedu yahay inay difaacato koobka oo ay mar labaad oo xidhiidh ah ku guuleysato, waxaase ay taasi uga baahan tahay shaqo badan iyo inay dibu-habayn ku sameeyaan safkooda difaaca ee u furnaa goolasha kooxda kasoo horjeedda iyo khadkeeda dhexe ee aan cagaha adag ku taagnayn iyadoo uu xataa kabtankeeda Jordan Henderson usoo laabtay.
Saddex gool oo uu Mohamed Salah dhaliyey iyo mid uu ku daray Virgil van Dijk ayaa sabab u noqday inay ka badbaadaan khatartii ay Leeds gelisay ee saddexda gool ay u kala dhaliyeen Harrison, Bamford iyo Robert Koch.
Kulankan waxa laga diiwaangeliyey taariikho layaab leh oo aan beryahan lagu arag horyaalka Premier League, waxaana ka mid ahaa:
Liverpool oo sii dheeraysatay rikoodhkeeda aan gurigeeda lagu garaacin muddo 60 ciyaarood ah (49 guulood iyo 11 barbarro ah), waxaanu noqday rikoodhkii saddexaad ee 60 ciyaarood iyo ka badan ah ee ay kooxi garoonkeeda guul-darro kaga badbaado. Chelsea ayaa sannadkii 2008 dhigtay rikoodhka ugu badan oo 86 ciyaarood aan Stamford Bridge lagaga badin, kooxda kale ee sidan oo kale samaysayna waa Liverpool oo sannadkii 1980kii aan 63 ciyaarood oo xidhiidh ah aanu khasaare kasoo gaadhin kulamadii ay garoonkeeda ku dheeshay.
Waxa uu kulankani noqday ciyaartii labaad ee furitaanka horyaalka Premier League ah ee abid la iska dhaliyo wax ka badan 5 gool. Waxa ka horreysay ciyaar sannadkii 2006 ay Manchester United 5-1 kaga adkaatay Fulham, taas oo waqtigii nasashadu uu ku dhacay 4-1.
Liverpool ayaa markii ugu horreysay laga dhaliyey saddex gool iyo ka badan laba ciyaarood oo isku xiga tan September 1982 oo ahayd marka kaliya ee hore looga soo dhaliyey saddex gool iyo ka badan laba ciyaarood oo isku xiga.
Virgil van Dijk ayaa sameeyey laba qalad oo sabab u noqday laba gool oo toos ah afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League ah, waana rikoodh qaladaad ah oo aanu soo samaynin 154kii ciyaarood ee ka horreeyey ee horyaalka uu u ciyaaray Liverpool. Kulamadaas hore ee 154ka ah, waxa kaliya oo uu sameeyey hal qalad oo gool noqday.
Jack Harrison, Patrick Bamford iyo Mateusz Klich ayaa noqday saddexdii ciyaartoy ee ugu horreeyey ee kulankoodii ugu horreeyey horyaalka Premier League goolal u dhaliya Leeds United, tan iyo sannadkii 2002 oo Nick Barmby uu kulankii furitaanka xili ciyaareedkaas ka dhaliyey goolal Manchester City. Waxa kale oo ay u noqotay markii koowaad ee ay Anfield gool ku dhaliso Leeds tan iyo November 1998kii, waxaana xilligaas shabaqa Liverpool taabtay Alan Smith.